Mayelana NATHI - Dongguan Allwin Kumile Co., LTD
Dongguan Allwin Kumile Co., LTDyasungulwa ngo-1999. Itholakala eWan Jiang Area yedolobha laseDongguan, esifundazweni saseGuangdong. Sisungule i-Allwin Industry (HK) International Limited ngo-2009. I-Ninghai Allwin stationery Co., LTD yasungulwa ngo-2010. Inkampani yethu ikhethekile ekukhiqizeni izinto zokubhala zasehhovisi, imikhiqizo eyinhloko isika umata, umsiki ojikelezayo, osika iphepha, isibhakela sephepha, iphepha i-fastener, i-paper shredder, i-laminator. Ukusebenza kahle okuphezulu nokukhiqizwa kwezindleko eziphansi, okwenza imikhiqizo yethu ikhwalithi ngokugqamile, futhi intengo incintisana kakhulu.
Inkampani yethu inekhono elihle lokuklama umkhiqizo omusha sinomnyango wethu we-R & D. Sinikezela ngemikhiqizo eyenzela amakhasimende ethu. Singavula isikhunta esisha semikhiqizo emisha yekhasimende, futhi sihambisane nezincazelo zebhizinisi. Siyakwamukela ukubambisana kwe-OEM. Ama-Punchers amaningi athuthukiswe yinkampani yethu abhaliswe njenge-patent kazwelonke.
Inkampani yethu ibhalisiwe brand "Allwin" inama-ejenti amaningi ezifundazweni eziningi ezifuywayo nasemadolobheni, ikhule yaba uhlobo oludumile lwezinto zokubhala. Sine-ejenti endaweni ethile eseNingizimu-mpumalanga ye-Asia naseMelika.
Isiko lethu lebhizinisi:
Ukuze ube ngumkhakha omusha wezinto zokubhala ezihola phambili.
Amabhizinisi nabasebenzi bakhula ndawonye, ​​bakhe inani lamakhasimende, futhi bathathe umthwalo emphakathini.
Uthembekile futhi wenza izinto ngobuciko, wenza izinto ezintsha futhi uyamangalisa, unomusa futhi uyabonga.
Ukubukwa kwethalente ezinkampani
Wonke umuntu uyithalente ngokwakhe.
Umklamo wokugcina womkhiqizo, ukusebenza kwezindleko zomkhiqizo okuphezulu ngokweqile, insizakalo yamakhasimende enani eliphakeme kakhulu.